Yakanakisa Handheld Transit-nguva Ultrasonic Flowmeter TF1100-EH&TF1100-CH Mugadziri uye Factory |Lanry
TF1100-CHHandheld Ultrasonic Flow Meterinoshanda panzira yekufambisa-nguva.Iyo clamp-on ultrasonic transducers (sensors) yakaiswa pamusoro pekunze kwepombi kune isiri-invasive uye isingapindire inoyerera kuyerwa kwemvura uye liquefied gasi mupombi yakazara yakazara.Matatu mapeya ematransducer anokwana kuvhara iyo yakajairika pombi dhayamita renji.
14 maawa bhatiri (rechargeable), back-lit 4 mitsetse inoratidza.
Inogona kushandiswa kuyera nhare, kuyerera kwechiyero, kuenzanisa data, metres inomhanya mamiriro ekutarisa.
Wide bi-directional flow range ye 0.01 m/s kusvika 12 m/s.Wide mvura tembiricha siyana: -35 ℃ ~ 200 ℃.
Inoshanda zvakavimbika mune zvese zvakachena uye zvakati tsvina zvinwiwa zvine turbidity <10000ppm.
Huremu uye nyore kutakurika mubhokisi.
Magetsi AC: 85-265V Kusvikira ku14 h ine mabhatiri emukati akachajiwa
Dhigirii rekudzivirira IP65 zvinoenderana ne EN60529
Zvinhu zveimba ABS( UL 94HB)
Kukurukurirana OCT, RS232, Yakanyorwa data
Nyora M 60(h)*34(w)*33(d)mm
Zvinhu zve transducer Aluminium yemamiriro ekushisa.sensor, uye tarisa kune yakanyanya kupisa.sensor
Cable Length Kureba: 5m
TF1100-EH/CH Handheld Transit-nguva Ultrasonic Flowmeter
2 RS232 Kubuda
S -35～85℃(kwenguva pfupi kusvika ku120 ℃))
H -35～200℃（(Chete S , M sensor.)
5m 5m (yakajairwa 5m)
Xm Common cable Max 300m(chiyero 5m)
TF1100-EH/CH - A - 1 - 2 - /LTH— M - N - S - DN100 - 5m (muenzaniso configuration)
Zvakapfuura: Insertion Transit-nguva Ultrasonic Flowmeter TF1100-EI
Zvinotevera: Inotakurika Transit-nguva Ultrasonic Flowmeter TF1100-EP